asia | Otu Di na Nwunye
July 10, 2019 + Asia, China, Nhazi njem
Beijing, isi obodo China, bụ otu n'ime ebe ndị njem nleta zuru ụwa ọnụ n'ụwa nile, ọ bụkwa maka ezi ihe kpatara ya. Obodo a na-etu ọnụ banyere ọgaranya akụkọ ihe mere eme na-alaghachi ihe kariri otu puku afọ na akara ngosi dịka nnukwu Wall na obodo a machibidoro iwu. Ewezuga akụkọ akụkọ bara ọgaranya, isi obodo China a bụkwa ihe atụ maka obodo ndị ga-abịa n'ọdịnihu na narị narị ndị isi ụlọ. Ebe a bụ ... GỤKWUO
June 8, 2019 + Asia, Nri na ihe ọṅụṅụ, History, Philippines, omenala, Nhazi njem
Otu n'ime akụkụ kachasị mma nke njem bụ ọmụmụ na nchọpụta nke ọdịbendị, ọ bụghị naanị maka taa, kama nke oge ndị gara aga. Oge ndị a, colonial na oge ochie na akụkụ dị iche iche nke ụwa, ọ bụghị nanị na-esetịpụ ebe maka mpaghara na ndị dị iche iche, ma ihe ha bụ. Otu ebe dị otú ahụ bụ Las Casas Filipinas de Acuzar. Las Casas ... GỤKWUO
August 26, 2018 + Asia, Hotels, Philippines, Resorts, Njem ego njem, Nhazi njem
Nyochaa: Crystal Beach Resort na Zambales, Philippines
Crystal Beach Resort bụ ebe dị egwu na ebe nkiri dị ihe dị ka awa anọ n'ebe ọdịda anyanwụ Manila, na Philippines. Mgbe ị na-aga Philippines, ọnwụnwa nwere ike ịbụ ịchọpụta ebe ị nụtụrụ - nnukwu obodo, dị ka Manila, na ọbụna ụfọdụ n'ime àgwàetiti ndị njem nleta ndị a maara na ndị Western, ma Crystal Beach Resort bụ ebe ị kwesịrị ... GỤKWUO